UJuan Torres Zalba. Udliwano-ndlebe nombhali we-Senator yokuQala yaseRoma | Uncwadi lwangoku
Ukufota: UJuan Torres Zalba, iphepha likaFacebook.
UJuan Torres Zalba ivela ePamplona kwaye isebenza njenge igqwetha, kodwa ngexesha lakhe lokuphumla uzinikela kuncwadi loncwadi lwembali. Emva kokuthumela Pompelo. Iphupha lika-Abisunhar, kunyaka ophelileyo Isenenja yokuqala evela eRoma. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho kunye nobubele obunikezelwe kule nto udliwano ndlebe, apho athetha ngaye kunye neminye imixholo emininzi.
UNCWADI NGOKU: Incwadana yakho yamva inesihloko Isenenja yokuqala evela eRoma. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
UJUAN TORRES ZALBA: Inoveli ibalisa ngeziganeko ezenzeka kwiriphabliki yaseRoma phakathi kweminyaka ye-152 ukuya kwi-146 BC, ixesha apho isiganeko esibalulekileyo senzeke, iMfazwe yesiThathu yePunic kunye nokuthinjwa kokugqibela kunye nokutshatyalaliswa kweCarthage.
Lo ngumxholo oyintloko womsebenzi, apho siya kuba nako ukwazi kuqala-izandla zamanani amakhulu embali yelo xesha (uScipio Emiliano, uCato omdala, uCornelia, ongumama wabazalwana bakaGraco, njl.) , amadabi kakhulu efanelekileyo, amaphulo e-Afrika kunye Hispania, imicimbi yezopolitiko eRoma kunye Carthage, imithendeleko, amasiko, ubomi bemihla ngemihla kwaye kakhulu ngakumbi kumaphepha ayo asibhozo amakhulu.
Emva kwenoveli yokuqala, eyayidityaniswe nesiseko saseRoma sesixeko sam, iPamplona, ​​ndandifuna ukujongana nembali enkulu, enebhongo ngakumbi, Imbali ngoonobumba abakhulu, kwaye ngeli xesha leRiphabhlikhi yaseRoma ndandinomdla ngabalinganiswa bayo. , bonke bekumgangatho wokuqala, indumasi yayo kunye nobukhulu bayo bezopolitiko, isandulela soguqulo lwabazalwana baseGraco. Kwaye ke, kancinci kancinci, umbono wenoveli wavela, endiye ndayithanda ngakumbi njengoko bendiqhubela phambili kumaxwebhu. Kuphela luhlaselo lokugqibela lweCarthage yimikhosi yamaRoma kunye nendlela ekufikelelwa ngayo kule meko yezopolitiko. Yayisisixeko esikhulu esinodonga oloyikekayo kunye nenani elikhulu labantu elilungele nantoni na. Kodwa amaRoma angena. Kumele ukuba yayimbi kakhulu into eyenzekayo apho.
JTZ: Inyaniso kukuba andikhumbuli ukuba yeyiphi incwadi endaqala ukuyifunda. Ndingathi omnye kwabaHlanu. Usisi wayenazo zonke kwaye ndandizithanda.
Ndimdala kancinci, hayi kakhulu, ndinothando olukhethekileyo kwenye enesihloko esithi Edeta's Hill, inoveli yabantwana malunga neMfazwe yesiBini yePunic. Kungenzeka ukuba iphawule into ethile kum, umnqweno okanye umnqweno weMbali kunye neMbali ephilayo.
Nangona kunjalo, ndikhumbula kakuhle (kwaye utata uyayenza) ibali lokuqala endilibhalileyo. Yayikukulinganisa amabali athi "Abahlanu", amafutshane kakhulu, kodwa abhalwe ngokwam. Kwaye inyaniso kukuba xa ndiyifunda namhlanje kubonakala ngathi ayimbi kwaphela (watsho encumile).
AL: Kwaye umbhali oyintloko? Ungakhetha ngaphezu kwesinye kwaye kuwo onke amaxesha.
JTZ: Ndizithanda kakhulu iinoveli ezinamandla, kwaye hayi ngokufuziselayo, kodwa ngenxa yomthamo wazo. Ndiyayithanda iPosteguillo, kunjalo, kodwa ngakumbi uColen Mccullough, onomsindo. Iinoveli zakhe zeRoma yamandulo ziyachukumisa. Indalo, nguGore Vidal, nayo yashiya uphawu lwayo kum.
Kwaye ukuba siyishiya inoveli yembali, ndiyayithanda iNkosi yeRings. Ngomnye weencwadi ezimbalwa endizifunde izihlandlo ezininzi (andingomfundi ophindayo).
JTZ: Bendingathanda ukudibana nabaninzi, ndibabone bejikeleza eRoma, abanje ngeCato, Scipio Emiliano, Cornelia, Appius Claudius Pulcro, Tiberius noGaius Sempronius Graco, Sertorio, Pompey the Great ... kwaye ndinethamsanqa ukuba sele zidalile. Ndiswele abanye, kodwa ngamanye amaxesha.
JTZ: Inyaniso kukuba, hayi. Ndikhe ndacinga ngalo mbuzo kangangexesha elithile, kodwa ndiyabona ukuba akukho nto ndiyithandayo okanye imikhwa. Ndibhala nini kwaye ndikwazi njani (ngakumbi ebusuku kunasemini), kodwa kungekho nto ikhethekileyo yokuthetha ngaphaya kwento yokuba ndifuna ukuthula okukhulu. Endlini yam besele bayalelwa ukuba xa ndibhala kungcono bangandijongi (ndiyibaxa kancinci).
JTZ: Yhooo besele ndiyiphendulile lonto. Umzuzu endiwuthandayo kusebusuku (ndisisikhova kakhulu), kwaye malunga nendawo, ndiyitshintsha ngamanye amaxesha, ngamanye amaxesha kwigumbi lam lokulala, abanye etafileni ekhitshini, abanye kwigumbi elisebenza njengeofisi .. .ngokwam nika kwaye ndiziva ndikhululeke kakhulu.
JTZ: Uhlobo lwencwadi endiluthanda ngokugqibeleleyo yinoveli yembali. Ngaphandle kwayo, uhlobo lwefantasy nalo luyanditsala, kodwa njengoko bethetha, ibhokhwe idonsa intaba.
JTZ: Okwangoku ndintywiliselwe ekuqhubekeni kweSenator yokuQala yaseRoma. Ukufundela ukonwabela ukufunda andinalo ixesha ngoku. Umsebenzi wam sele ufuna ukuzinikela okukhulu, kwaye indawo endinayo kukubhala. Ehlotyeni ndiye ndathatha ikhefu no-El Conquistador, nguJosé Luis Corral.
AL: Ucinga ukuba unjani umcimbi wopapasho?
JTZ: Ndiyakholelwa ukuba ayikhange ibhalwe kwaye ipapashwe njengoko kwakunjalo, zombini ngefomathi yamaphepha kunye nedijithali. Kuyinyani ukuba ababhali be-novice ukufikelela kumshicileli kunzima ngokwenene, kunye nokuthengisa, ekubeni ukhuphiswano kunye nomgangatho uphezulu kakhulu. Kwimeko yam, ndinethamsanqa elikhulu lokuba nendlu yopapasho endikhathalela kakhulu (Icandelo leencwadi). Kwakhona ndiyabona ukuba kukho iiblogi ezininzi zoncwadi (ezinje ngale), amaqela okufunda, amaqela kwiintanethi zentlalo kunye namawaka amalungu, njl., ekuthi ngaphezu kokunika ukubonakala okwamkelekileyo, kubonisa ukuba umdla wokuyifunda uphelele. ukusebenza kakuhle.
Enye into ngumonakalo owenziwa bubuqhetseba, obonakala uxhaphakile. Umzamo owenziwayo ekudaleni inoveli okanye nawuphi na umsebenzi woncwadi mkhulu kakhulu, kwaye kuyakhathaza kakhulu ukubona indlela ezijikeleza ngayo iincwadi ezinobuqhetseba.
Kwabanye, sisanda kubona indlela abavakalisi abakhulu abasayina ngayo ababhali, nto leyo ebonisa ukuba ihlabathi lokushicilela liyahamba, liphila kakhulu.
JTZ: Kwimeko yam andikhange ndiswele msebenzi (ngokuchaseneyo noko) kwaye andizange ndibe namava abuhlungu, ngoko ndicinga ukuba andinasizathu sokukhalaza. Nangona kunjalo, kuyinyaniso ukuba, njengaye wonke umntu, ndinomnqweno omkhulu wokubuyisela ubomi bam bangaphambili, uvuyo lwabo, ukuzonwabisa, ukuhamba okanye ukukwazi ukuba nosapho kunye nabahlobo ngaphandle koloyiko. Ngapha koko, andiqondi ukuba ndiza kufumana nantoni na eyakhayo kumabali azayo. Ibilixesha elide kwaye linzima elona lishiyeke ngasemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UJuan Torres Zalba. Udliwano-ndlebe nombhali we-Senator yokuQala yaseRoma